Archive du 20170531
Miala any ny jadona Hosamborina avy hatrany izay migrevy
Ny tombontsoa ambonin�ny firenena no zava-dehibe ka mila alamina daholo ireo sehatra misy na manomboka misy fitokonana amin�izao fotoana.
� Force de changement � Tsy ho tafatsangana eto ny fitsarana ambony
Nifamotoana teny amin�ny foiben�ny antoko AKFM etsy Andravoahangy ambony omaly ireo hery politika nivondrona ho ao anatin�ilay antsoina hoe � Force de changement � na hery fanovana izay najoro ny alarobia lasa teo.
Kaominina Ampitatafika Mandeha tsara ny fandoavan-ketra
Tontosa ny fampanantenan�ny Ben�ny tan�na Rado Ramparaoelina fampisitrahana traktera ny vahoakan�Ampitatafika. Efa mirotsaka tanteraka amin�ny fanampiana ny fiarahamonina eny an-toerana ity fitaovam-pamokarana ity nanomboka ny volana martsa 2017.
Antoko AREMA Mila mihavana aloha isika
Afaka nanao fifidianana foana isika fa tsy izany akory no nampandroso, fa ny laharam-pahamehana aloha dia ny mitady hevitra hampivondronana ny Malagasy, hoy i Simon Pierre, sekretera jeneralin�ny antoko Arema.
Antenimieram-pirenena Tena misy depiote nahazo 4X4
Na dia maro aza ireo solombavambahoaka no nilaza ho tsy mahalala ny fisian�ny fanomezana ilay 4 X 4 double cabine Mazada BT 50 dia voaporofo an-tsary nalain�ny mpanao gazety teny an-toerana ny fisitrahan�ireo depiote vitsivitsy voafidy manokana nisitraka izany.
Hery Rajaonarimampianina Tena miasa, hoy i Rija Razafimandimby
Nahazo vahana teto amintsika ny fanaratsiana ny mpitondra tato ho ato, hoy i Rija Razafimandimby mpanao politika. Anisan�izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay nomarihiny manokana fa hatao mihitsy izay fomba entina hamotehana azy.
Taratasin�i Jean Kely sisa
Aleo dia mionona ry Jean hoe efa kely sisa dia hifarana ny fahoriana a ! Izay maharitra ihany, hono, no ho voavonjy amin�ny farany e !
Fandaminana eny Analakely Mpivarotra 320 nafindra toerana
Ao anatin�ny vanim-potoanan�ny fety isika izao, ka nisy ny fandaminana an�ireo mpivarotra amoron-dalana teny anoloan�ny Esplanade Analakely nataon�ny kaominina Antananarivo Renivohitra omaly talata 30 mey 2017.
Filohan�ny SMM � Tsy maintsy ho avy ny anjaran�ny senatera Riana�
Nibaribary loatra ny karazan�olona tsimatimanota eto Madagasikara, tao anatin�ny raharaha Claudine Razaimamonjy, hoy ny filohan�ny Sendikan�ny mpitsara eto Madagasikara (SMM) halina tao anatin�ny fandaharana Donakafon�ny Top radio 102.8 FM.
Lal�na momba ny sekolim-pinoana Tena mety ho an�ny sekoly FJKM, hoy Raharinaivo Falimanana
Anisan�ny niteraka resabe teny anivon�ny fiarahamonina teo aloha ny momba ireo sekolim-pinoana izay tsy mahazo mampivavaka mpianatra mihoatra ny ora dimy isan-kerinandro.
Tsy vonon-kihavana !
Samy mivoy ny resaka fampihavam-pirenena ny ankamaroan�ny hery politika eto amin�ny firenena amin�izao fotoana. Hatramin�ireo hery politika matanjaka sy manohitra ny fitondrana, toy ny antoko Tiako i Madagasikara aza dia mivoy an�izany satria izay no hany tokana hivoahana amin�ny krizy.
Dr Pierre-Sans Firenena mahantra indrindra faha-5 i Madagasikara
Vao 1 volana monja ny Dr Pierre-Sans manampahaizana manokana amin�ny fitiliana ny aretina � autisme � ary efa nahasoratra boky maro mahakasika izany no tonga teto Madagasikara araka ny fanasan�ny fikambanana Autisme Madagascar azy nanao fitiliana ireo voan�ny � autisme �
Setro-tsigara Ny manodidina ilay mpifoka no tena voa mafy
Maro ireo olona mpifoka sigara amin�ny ankapobeny. Mahatratra 6 tapitrisa isan-taona, mantsy maneran-tany, ireo olona voasarika hifoka izany. Folo taona no kely indrindra amin�izany, amin�ny ankapobeny, raha mihoatra ny 70 taona no zokiny indrindra.
Didimpoitra Efa azo atao amin�ny vanim-potoana rehetra
Efa azo atao amin�ny vanim-potoana rehetra misy ny didim-poitra, araka ny fanazavan�ny dokotera Fidy Bariniaina fa tsy voatery ho amin�ny vanim-potoanan�ny ririnina tahaka izao ihany.
Fizarana PPN Tsy asana filoham-pirenena, hoy i Beriziky
Naneho ny heviny mikasika ny fahitany ny fihetsiky ny filoham-pirenena izay mizara vatsin-tsakafo ilaina amin�ny fiainana
Asa fampianarana Tsy omen�ny mpitondra lanja, hoy ny Seces
Na ny vahoaka aza mahatsapa fa faralahin�asa ny fampianarana sy fikarohana, hoy ny filohan�ny sendikan�ny mpampianatra mpikaroka (Seces) eto Antananarivo, Sammy Gr�goire Ravelonirina.
Zandary tratra manao kolikoly Horoahina avy hatrany
Naato nanomboka ny 13 lasa teo ny asan�ireo zandary manao fisavana eny amin�ny lal�m-pirenena noho ny fandrenesana matetika ny fanaovan�izy ireo kolikoly araka ny fanomezam-baovaon�ny tompon�andraikitra eo anivon�ny zandarimariam-pirenena.
Fantatra ankehitriny fa teratany Italianina ilay vahiny mpanao vola sandoka ary manaparitaka an�izany ao Nosy-Be.